भेरीका मेयर भन्छन्- कुटीकुटी मारिएको रहेछ, हत्यारा कानुनको दायरामा आउँछन् - Kantipath.com
काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको दर्दनाक घटनामा मारिएकाहरुलाई कुटीकुटी मारिएको भन्दै भेरी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रप्रकाश घर्ती आक्रोशित भएका छन् ।
उनले नदीमा भेटिएका शवको प्रकृति हेर्दा नवराज विकलगायतलाई कुटेरै मारेको प्रष्ट भएको दाबी गरे । भेरी नगरपालिका ४, रानागाउँका विकको शव शनिबार भेरी नदीको किनारमा फेला गरेको थियो । त्यस्तै अन्य दुई जनाको श’व पनि सोमबार फेला परेको थियो ।
पश्चिम रुकुम, चौरजहारी नगरपालिका ८ की प्रेमिका सुष्मा मल्ललाई भगाउन जाँदा उनका आफन्त र गाउँलेले प्रतिकार गर्ने क्रममै नवराज बिक र उज्नका साथीहरुको ह’त्या भएको थियो ।
घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरि दोसिहरुमाथि का’र’वाही गर्न दबाब आइरहेका बेला भेरी नगरपालिकाका मेयरले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
मेयर घर्तीले पीडित परिवार, आफन्तहरू भेटेर आइसकेको र घटनामा जोडिएका २० जना विरुद्ध किटानी जाहेरी गरिएको पनि बताउदै उनले अनुसन्धानका क्रममा पूरक जाहेरी पनि पर्न सक्ने बताएका छन् । यस्तै उनले आफ्नो नगरपालिकाले ठूलो क्षति बेहोरेको बताउदै घटना जुनसुकै नियत र उद्देश्यले भए पनि अ’प’राधीहरूलाई उम्कन नदिने बताएका छन् ।
उनले नवराजलगायातका युवाहरुले भेरीमा हाम फालेर मरे भन्‍न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै टाउकाको चोट र श’वको प्रकृति हेर्दा हत्या गरेर नदीमा फालिएको हो भन्ने निष्कर्षमा आफुहरु पुगेको बताएका छन् ।
“यो घटनाले मानवताको उपहास त गरेको छ नै व्यक्तिको बाँच्‍न पाउने हक पनि छिनेको छ । अपराधीहरू जो कोही भए पनि कानुनको दायरामा आउँछन्,” घर्तीले भने । आजै शवको पोस्टमार्टम पनि हुँदैन । मृतकमध्ये टीकाराम सुनार रुकुमको भएकाले शव चौरजहारी लगिएको बाँकीको भेरीमै पोस्टमार्टमका लागि राखिएको बताए ।
घर्तीले मृतकमध्ये दुईजनाको परिवारलाई आज किरिया खर्च उपलब्ध गराइने बताए । नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर जनही २५ हजार दिने निर्णय गरेको भए पनि आज नवराज र गणेश बुढाको परिवारलाई १०-१० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने उनले बताए । घ’टनामा संलग्न केहीलाई प्रहरीले पक्राउ पनि गरिसकेको छ ।
Previous Previous post: गणतन्त्र ल्याउन लडेका शक्तिबीचको ऐक्यबद्धता आजको आवश्यकता : प्रचण्ड
Next Next post: कोरोना कहरबीच किन सगरमाथा आरोहण गर्दैछ चिनियाँ टोलि ?
अभिनेत्री भन्छिन् : निर्माताले मलाई दुई पटक बलात्कार गरे !
SEE नतिजा : सामुदायिक विद्यालय अझै कमजोर
ईमान्दार भएर काम गर्न प्रहरी आयुक्त पोखरेलको कडा निर्देशन
एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा कसरी सर्छ कोरोना, बैज्ञानिकले पत्ता लागाए नयाँ तथ्य